बीजेपीको चुनावी कार्ड बन्लान् त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ? यसरी सुधारे भारतसँग सम्बन्ध – Medianp
बीजेपीको चुनावी कार्ड बन्लान् त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ? यसरी सुधारे भारतसँग सम्बन्ध
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक १९, २०७५१२:२६0
काठमाडौं, १९ कात्तिक । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतीय गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बन्ने यो चर्चासँगै राजावादीहरू उत्साहित भएका छन् । राजतन्त्र पुनर्बहालीको अभियानमा लागेका पूर्वराजा शाह गणतन्त्र दिवस समारोहमा सहभागी होलान् या नहोलान्, त्यो केही समयपछि नै थाहा हुनेछ, तर सन् २०१९ मा हुने लोकसभा निर्वाचनका बेला भारतीय जनता पार्टीले पूर्वराजालाई ‘चुनावी कार्ड’ बनाउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
२६ जनवरीमा भारतले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आएको सन्दर्भमा पूर्वराजाले इच्छा देखिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । आमनिर्वाचनसमेत आउन लागेकाले यस वर्षको गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउने तयारीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छन् ।
मोदीले गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथिका रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आमन्त्रण गरेका थिए, तर ट्रम्पले कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थिति हुन नसक्ने जनाए । ट्रम्प नआउने भएपछि मोदीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई निमन्त्रणा पठाए । पुटिनले पनि कार्यव्यस्तताका करण आउन नसक्ने जानकारी दिएका थिए ।
समाचार स्रोतका अनुसार मोदीले इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विदोदोलाई निमन्त्रणा पठाएका छन् । उनी आउने सम्भावना रहेन भने भारतीय गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बन्ने अवसर नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पाउने चर्चा पनि कतैकतै चलेको छ ।
भारतको गत आमचुनावमा मोदी अत्यधिक लोकप्रिय थिए । चुनावपछि उनी झन् लोकप्रिय भए । तर, मोदी र भाजपाको लोकप्रियताको ग्राफ निक्कै ओरालो लागिसकेको छ । सन् २०१९, आउँदो चुनावमा भाजपाले दिग्विजय प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता भत्किसकेको छ । भाजपालाई आउँदो चुनाव फलामको च्यूरा सावित हुने निश्चित छ । यो स्थितिमा भाजपा नेतृत्वले कुनै न कुनै चुनावी मसला खोज्नुपर्ने हुनसक्छ ।
हिन्दूत्वको आडमा सत्तारुढ बनेको भाजपाले हिन्दूत्वका लागि देशभित्र ठोस रुपमा केही गर्न सकेन । देशभित्र नसके पनि नेपाललाई हिन्दू राज्यमा फर्काइदिएर चुनावमा मत बटुल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता भारतमा बलवान देखिन्छ । नेपाललाई आफ्नो प्रयासमा हिन्दू राज्यमा फर्काउन सकियो भने चुनावमा ठूलो लाभ लिन सकिन्छ भन्ने भाजपाकै कैयन नेताहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । त्यसैले नेपालमा पूर्वराजाको केही समयदेखिको चलखेल त्यसकै निरन्तरता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
भारतीय बुझाईमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको छ, जसका कारण भारतलाई दीर्घकालीन सुरक्षा खतरा पैदा भएको छ । दीर्घकालीन सुरक्षा खतराको दीर्घकालीन नै समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालको राजसत्ता आफूले बोकेका राजालाई सुम्पनु उपयुक्त हुने भारतीय ठम्याइँ हुनसक्छ ।
राजतन्त्र हटाउन भारतको भूमिका कसैबाट छिपेको छैन, खुलस्त भइसकेको छ । राजतन्त्र हटेपछि नेपालले भारतीय हित हेरेन, चीनसंग पनि सम्बन्ध बढायो । नेपालमा आफ्नो स्थायी मित्र कुनै पार्टी भएनन्, कुनै शक्ति भएनन्, त्यसैले राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय धारणा हो भन्ने धेरैको भनाइ छ ।
राजसंस्था पुनरस्थापना हुने हल्ला अब हल्ला मात्र नरहन सक्छ, यो मुद्दालाई भारतले राम्रैसँग बोकिदिन सक्छ, त्यसको संकेत मिलेको छ । गणतन्त्र दिवसमा पूर्व राजालाई प्रमुख अतिथि बनाइएन भने पनि राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई भारतले खुलेर साथ दिने दावी पूर्वराजा निकटहरूको छ ।
क्रिस्चियनको गतिविधि बढेपछि भाजपाका विभिन्न नेताहरूले नेपालमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यस बीचमा पूर्व राजाले भारतका विभिन्न तहका नेताहरूसँग बारम्बार भेटवार्ता गरिसकेका छन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि पूर्व राजाको चारपटक भेटवार्ता भइसकेको दावी पूर्वराजा निकटकाहरूले गर्ने गरेका छन् ।
हालै मात्र पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारत भ्रमण गरेका थिए । उनलाई महाराजासरहको हैसियत दिएर त्यहाँका हिन्दूवादीहरूले मुम्बईमा मानसम्मान र सत्कार गरे । अहिले नेपालले अपनाइरहेको राजनीतिक कोर्षसँग भारत असहमत देखिन्छ । भारतीय संस्थापनमा एकछत्र पकड जमाइरहेको भाजपा नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहन्छ भन्ने पनि प्रस्टै छ । यता, ज्ञानेन्द्र शाह पनि हिन्दूवादी रथमा सवार भएर गुमेको गद्दी फर्काउन आतुर छन् । यी कारणले गर्दा भारत र पूर्वराजाको सम्बन्ध स्वतः सुधारिएको बुझिन्छ ।